Dowladda Somaliya oo sheegtay Gobolka Hiiraan inaan loo qaybin karin labo Gobol | Baydhabo Online
Dowladda Somaliya oo sheegtay Gobolka Hiiraan inaan loo qaybin karin labo Gobol
Kadib markii Odayaasha Dhaqanka reer Hiiraan horay ay u soo bandhigeen arinta ku aadan in Gobolka Hiiraan labo Gobol loo qaybiyo hadii la doonaayo Odayaasha reer Hiiraan inay ka qaybgalaan Shirka Jowhar, ayaa arintaasi markii ugu horeysay waxaa si cad uga jawaabay dowladda Federalka Somaliya.
Wasiirka Arimaha Gudaha Somaliya C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) oo ka qaybgalaayay Barnaamij xalay ka baxay Tv-ga Dowladda ayaa wuxuu sheegay inaysan suuragal aheyn in Gobolka Hiiraan labo loo qaybiyo.
Wasiir Odawaa wuxuu sheegay Dastuurka KMG ee dalka inuu dhigaayo 18-Gobol, sidaasi awgeedna ay adag tahay in Gobol kale oo cusub in la sameeyo.
“Cabashooyinka naloo soo gudbiyay waan ka jawaanay, arinta Hiiraan ee ah in labo Gobol laga dhigo Dastuurkeena waxaa ku qoran 18 Gobol anaga ma sameyn karno Gobol kale.” Ayuu yiri Wasiirika Arimaha Gudaha Somaliya.
Wasiir Odawaa ayaa dhinaca kale sheegay Dowladda Somaliya inaysan ku fashilmin dhismaha Maamulka Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe.
“Arinta Hiiraan iyo Shabellaha dhexe, ma aaminsani inay fashilantay IGAD xubin ayaan ka nahay waxa ay nagala shaqeysay Kismaayo, waxa ay nagala shaqeysay Baydhabo, hada waxa ay nagala shaqeynaysaa Hiiraan iyo Shabellaha dhexe, marka in IGAD ay ku jirto macnaheeda ma ahan in Dowladda Federalka Somaliya aysan ku jirin Heshiiskaan waxa aan saxiixnay September welina waa socdaa, dadaalkaasi ma fashilmay.” Ayuu yiri Wasiir Odawaa.
Shirka Maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe, ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda si rasmi ah uu dib kaga biloowdo Magaalada Jowhar ee xarunta Gobolka Shabellaha dhexe.